काठमाडौंँ : यो वर्ष नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको मात्र तुलना गर्दा ३.२४ प्रतिशत अर्थात् ५१ हजार ७३८ हेक्टर बढीमा धान रोपाइँ भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान खेतीको कुल क्षेत्रफल १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । त्यसमध्ये यो वर्ष १३ लाख ४६ हजार ९२० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको छ । यो कुल क्षेत्रफलको ९८.१९ प्रतिशत हो । धान रोपाइँ क्षेत्रफल वृद्धि हुनुमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्त्याएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयको ठम्याइँ छ ।
२०७४ सालमा साउन १६ गतेसम्ममा कुल क्षेत्रफलको ७७.३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । अर्थात् १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ हजार ९५ लाख ८०४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । “अहिले समयमा धान रोपाइँ सम्पन्न हुनुुका साथै क्षेत्रफलमा समेत वृद्धि भएको छ । त्यसले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने छ,” प्रवक्ता केसीले स्पष्ट पार्नुुभयो । २०६६ देखि चार वर्षसम्म धानको उत्पादनमा ४० लाख मेट्रिक टन तथा २०७० देखि निरन्तर ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा धान उत्पादन ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन, आ.व. २०७४/७५ मा धान उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धान उत्पादन ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन र आ.व. २०७६/७७ मा धान उत्पादन ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
यो वर्षको साउन २७ गतेसम्म सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९९.८६ प्रतिशत भएको छ भने प्रदेश २ मा ९९.०२ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश ५ मा ९८.६६ र कर्णाली प्रदेशमा ९८.५३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । बाग्मती प्रदेशमा ९७.८५ र गण्डकी प्रदेशमा ९७.६८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा ९५.८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।